ဘေဘီလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ သူ့ဘာသာ ခေါင်းထောင်နိုင်ပြီလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care ဘေဘီလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ သူ့ဘာသာ ခေါင်းထောင်နိုင်ပြီလဲ?
ဘေဘီလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ သူ့ဘာသာ ခေါင်းထောင်နိုင်ပြီလဲ?
မေမေတို့ရေ…သူတို့ရဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေက ခေါင်းထောင်ဖို့ အလုံအလောက် မသန်မာသေးတာကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်ကို အစောပိုင်းလတွေမှာ ခေါင်းကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အထောက်အပံ့နဲ့ ထိုင်စေမယ်ဆိုရင် ၃လလောက်အကြာမှာ သူတို့ ခေါင်းကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခြောက်လလောက်မှာ သူတို့ရဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ သန်မာလာပြီး ခေါင်းကို ဟိုဘက်သည်ဘက်လှည့်နိုင်၊ ခေါင်းထောင်နိုင်ပါတယ်။
လိမ့်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ တွားသွားခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ မိုင်တိုင်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ အထောက်အပံ့မပါဘဲ ကလေးရဲ့ သူ့ဘာသာခေါင်းထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ အသက် ၅လအရွယ်မှာ ခေါင်းမနိုင်သေးရင် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။
မေမေတို့ရေ… ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဦးခေါင်းထိန်းချုပ်မှု ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးသလဲ၊ ကလေးတစ်ယောက်ကို ခေါင်းမတ်အောင် ဘယ်လိုကူညီမလဲ စတာတွေကို ပိုမိုသိရှိအောင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
ကလေးတစ်ယောက်မှာ ဦးခေါင်းထိန်းချုပ်မှုကို ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးသလဲ?
Head control ဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးဟာ ပံ့ပိုးမှုမရှိဘဲ သူတို့ခေါင်းကို မထောင်နိုင်ပါဘူး။ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ အားနည်းတာကြောင့် ခေါင်းနောက်ပြန်လှန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာ ကလေးထိန်းစဉ် ခေါင်းကို လက်တွေနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးထားရပါမယ်။
ကလေးတွေဟာ တစ်လပြည့်ပြီးလို့ မှောက်ခုံမှောက်တဲ့အခါ သူတို့ခေါင်းထောင်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသံလာရာဆီကို လှည့်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ပထလအဆုံးနဲ့ တတိယလကြားမှာ ကလေးအများစုက မှောက်ခုံမှောက်ချိန်မှာ ခေါင်းကိုမော့ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။
သုံးလသားအရွယ် ကလေးငယ်ဟာ မှောက်ခုံမှောက်ရင်း သူတို့လက်တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ခေါင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ကို မြှောက်နိုင်လာပါပြီ။ ကားထိုင်ခုံ (သို့) သိုင်းကြိုးထဲမှာဆိုရင်လည်း သူတို့ခေါင်းမတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှတ်တိုင်တွေ သူ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သူလာတာပါ၊ မေမေတို့ကလေးက အထောက်အပံ့မပါဘဲ သူ့ဘာသာခေါင်းမတ်နိုင်ဖို့ ငါးလမှ ခြောက်လခန့်စောင့်ဆိုင်းဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
ကလေးကို ခေါင်းမော့ဖို့ ဘယ်လိုအားပေးမလဲ?
မေမေတို့ကလေးကို တတိယလမှစပြီး သူတို့ခေါင်းကို ထိန်းထားဖို့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတွေက မေမေတို့ကလေးခေါင်းထိန်းထားနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကို ပက်လက်ထားပြီး သူတို့လက်ကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထူပြီး ထိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက လေးလမှ ငါးလအရွယ် ကလေးငယ်တွေအား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့နှင့် သူတို့ဦးခေါင်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီနိုင််ပါတယ်။
ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေရင်း သင့်ပခုံးပေါ်မှာ သူတို့ကိုမှီပြီး ချီထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကလေးအတွက် ခေါင်းကို အလွယ်တကူထောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ နောက်လှန်မကျအောင် လက်တစ်ဖက်နဲ့ သူတို့လည်ပင်းကို ထိန်းထားပေးရပါမယ်။
ငါးလမှ ခြောက်လအရွယ်ကလေးတွေဟာ ခေါင်းကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ၊ သူတို့ကို အသံပေးခြင်း၊ အခြားလားရာကနေ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သူတို့ကို အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးက အသံလာရာနောက်သို့ လိုက်ကြည့်တာ၊ ခေါင်းကို မော့ကြည့်တာ ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးမှောက်ခုံမှောက်တဲ့အခါ ခေါင်းထောင်လေ့ရှိတာကြောင့် ကလေးရဲ့ မှောက်ခုံမှောက်ချိန်ကို တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို ခေါင်းမော့စေဖို့ ကစားစရာအချို့ကို သူတို့နားမှာ ထားပါ။
ငါးလမှ ခြောက်လအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကို supported chair (သို့) မေမေတို့ရင်ခွင်ထဲမှာ ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ထိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ သူတို့ခေါင်းကို ထိန်းထားဖို့အတွက် ပိုလွယ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ခေါင်းထိန်းချုပ်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက် လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
“ကလေးငယ်ကို ခေါင်းထောင်နိုင်အောင် ကူညီနေစဉ်မှာ ရယူရမယ့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ”
မွေးကင်းစကလေး (သုံးလအောက်ကလေး)တွေအပေါ် ခေါင်းထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းတွေကို မလုပ်သင့်သေးပါဘူး။ ကလေးရဲ့ လည်ပင်းနဲ့ခေါင်းကို သူတတို့ထိန်းချုပ်မှု မဖွံ့ဖြိုးမချင်း ထောက်ပံ့ပေးထားရပါမယ်။
ကလေးတွေဟာ ခေါင်းကိုလှုပ်ရှားဖို့ ကြိုးစားရင့် လှိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်် အားပေးမှုအမျိုးမျိုးကို ကြိုးစားတဲ့အခါ ကလေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲထားပါ။ မတော်တဆပြုတ်ကျတာ၊ တိုက်မိတာ မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။
ကလေးကို နို့သီးသန့်တိုက်ပြီး ၆လကျော်တဲ့အခါ ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ဟာ များသောအားဖြင့် ကလေးငယ်တွေ ခေါင်းထောင်နိုင်တဲ့ အချိန် ၊အထောက်အပံ့မပါဘဲ ထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleဘဝရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားသိရှိစေဖို့အတွက် ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားပေးရမယ့် “ပျော်ရွှင်ဖွယ်စာရင်း”
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာနဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ကလေးတွေရဲ့ အကြောက်တရားကို ကျော်လွှားဖို့အတွက် သင်ကြားပေးနိုင်မယ့် Activities (၅)ခု